Mogadishu Journal » Dhakhaatiirtii Cuba oo madax furasho lagu doonayo
The U.S. and the Taliban Are Near a Deal. Here’s What It Could Look Like
Somalia’s al Shabaab hits military base, deaths on both sides
Dhakhaatiirtii Cuba oo madax furasho lagu doonayo
Mjournal :-Bishii Aprril 12-dii Kooxdii Magalada Mandheera ee Gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya ka afduubatay Dhaqaatiirta u dhalatay dalka Cuba ayaa waxaa ay dalbadeen lacago madax furasho ah.
Warbaahinta dalka Kenya gaar ahaan TV-ga Citizen ayaa baahiyey in Kooxdaas oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ay dalbadeen lacag dhan $1.5Milyan oo Dollarka Mareykanka ah.
Odayaal dhexdhexaadin ka galay Labada Dhakhtar ee u dhashay dalka Cuba kuna kulmay Al-Shabaab deegaan u dhaxeeya Bu’aale iyo Ceel Cadde oo ka kala tirsan Gedo iyo Jubada dhexe ayaa la sheegay inay dalabkaas Shabaab u soo marsiiyeen.
Odayaash ayaa waxa ay sheegeen in farriintaantaas loo soo dhiibay ay kala hadlayaan dowladda Kenya si loo soo daayo labada dhaqtar oo lagu kala Magacaabo Herera Korea iyoLandy Rodriguez.
Dowladda Cuba ayaa dhaqaatiirteeda kale ee ka shaqeynayay Magaalooyinka Wajeer,Gaarisa iyo Tana River ku celisay Xafiisyadooda Magalada Nairobi kadib markii ay cabsi soo wajahday wixii ka dambeeyey afduubkii loo geystay labada Dhaqtar.
Khasaaro ka dhashay qarax lala eegtay Ciidamada AMISOM
USA: Aminga Masaajidda oo la Adkeeyey
Madaxweyne Farmaajo oo lagu dhaweeyay Jabuuti by Ahmed Cali - Sun Aug 18th 17:23:06
UN ups the ante on JBIEC, says Jubbaland elections ‘regrettably fall short’ of agreed threshold by Ahmed Cali - Sun Aug 18th 14:00:44
Inside Kenya’s silent push as Jubaland all set for elections by Ahmed Cali - Sun Aug 18th 13:57:01
Maxakamadda Sare ee ciidamada oo xukun riday by Ahmed Cali - Sun Aug 18th 13:52:39
Madaxweyne farmaajo oo u ambabaxay dalka Jabuuti by Ahmed Cali - Sun Aug 18th 13:41:30